Sirta Caafimaadka iyo Soonka! Dr Saadiq Enow
Si haddaba loo dhowro nicmaddaas milgaha weyn, Eebe wuxuu inoo dooray waddadii lagu ilaalin lahaa. Soonka bisha Ramadaan ayaa wuxuu yahay cibaado kamid ah tiirarka lagu joojiyay waajibaadka diinta Islaamka. Islamarkaa, soonku waa mashruuc culus oo ilaalinaya caafimaadka qofka iyo bulshada. Waxaa la ogaaday in caafimaadka qofku, uu la xiriiro hab-dhaqameedka uu ku nool yahay. Talooyinka taraakhiitarta, howlaha kalkaaliyayaasha, qalabka loo adeegsado daweynta, dawooyinka iyo hay'adaha caafimaadka, ilaha ka hor-tagga cudurada, dhamaantood doorka ay ka qaataan caafimaadka qofka iyo bulshada, ma dhaafsiisna 80 %. Bulshada aqoonta leh, xubnaheeda waxay ka caafimaad badan yihiin bulshada aqoonta liidata. Bulshada hodanka ah, waxay ka caafimaad sareysaa bulshada saboolka ah. Bulshada baraaruggeedu sareeyo, waxay ka caafimaad wanaagsan tahay bulshada huruda. Run-badanaha aanan weedhiisa la beenin, Suubane Maxamad (shacni iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee), goor hore ayuu inoo tilmaamay xiriirka adag ee ka dhexeeyo soonka iyo ilaalada maslaxadda caafimaadka. Isagoo arinkaa ka hadlaya, wuxuu yiri :
" Sooma' aad caafimaaddeene ".
Quutkii qofku dhunjiyay, wuxuu gaarayaa caloosha. Waxaa markaas ku soo qubanaya dheecaano (Enzyms) ka imanaya qanjirro yar-yar oo caloosha gudaha iyo debadda kaga rakiban. Waxay qayb ka qaataan dhalan-rogga raashinka (Metabolism). Waa ay jejebinayaan, si markaas uu raashinkii u noqdo mid unugyadii jirka ay ka faa'iideysan karaan. Dheecaanada caloosha waxaa lagu magacaabaa Hydrochloric Acid ama Gastric Acid.
Caadada eyga calooshiisu baratay oo ah koorta ka horeysa raashinka, waxaa lamid ah, qofka caadeysta in uu wakhti go'an, sida joogto ah u qaato raashin. Tusaale quraac subaxdii ah, qado duhurkii ah iyo casho fiidkii ah. Markii sanooyin badan ay caloosha caynkaas barato, haddii uu jadwalkii xilliyada ii isbeddel ku yimaado, waxaa dhacaysa in dhacaanadii ay soo qubtaan, iyada oo calooshu maran tahay. Waayo qanjiradii ayaa caadeystay in xilligaas caloosha raashin ku soo dhacaan. Haddaba soonka wuxuu jebinayaa caadadaas rootiinka ah. Qanjiradii dheecaanada ayuu barayaa in eeyan dheecaan ku soo qubin caloosha, illaa uu raashin soo gaaro. Waxaa halkaas lagaga badbaadayaa cuduro badan oo caloosha iyo mindhicirka ku dhaca. Waxaa ugu culus cudurada xanuunka badan ee ah Gastritis iyo Ulcer.
" Badanaa mid sooman, kaas oo aanan soonkiisii ka heleyn wax dhaafsiisan gaajo iyo haraad ".
Anshaxa xumi oo ay kamid yihiin beenta, xanta, dira-dirada, xatooyada, cayda, faduusha, waxay qofka ka hor is-taagaan in uu helo abaalkii soonku lahaa. Waxaa lamid ah xad-gudubka raashin-qaadashada bisha Ramadaan, fadhiga badan iyo hurdada dheeraadka ah ee maalinta Ramadaanka, waxay hoos u dhigayaan faa'iidadii caafimaadka ee laga sugayay soonka. Jirka muddada uu hurdo uma baahna tamar badan oo uu bixiyo. Sidaa darteed, dadka hurdada ku dhamaysta bisha Ramadaan, waxay iska hor-joogsadeen faa'iidadii ugu hilan cuslayd ee soonku lahaa. Taas oo ah, in jirka laga nadiifiyo walxaha haraaga ah ee ku keydsan oo ay ugu horeeyaan sokorta, dufanka iyo brootiinka.
" ……………. inaad soontaan ayaa idiin wanaagsan, haddaad tihiin kuwo wax garanaya ".
--- Quote ---Waa inaan Ilaahay gartaa waa gob qaali ahe
Waa inaan sunnuhu kuma gabo'e sii hirgeliyaaye
W/Q: Dr. Saadiq Enow